Ciidanka NATO oo Dagaalkii Burcadbadeeda Soomaalida Joojisay iyo Iyga oo sheegay in ay sii aadi doonaan Badweynta Liibiya ee maraan Tahriibayaasha!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ciidanka NATO oo Dagaalkii Burcadbadeeda Soomaalida Joojisay iyo Iyga oo sheegay in ay sii aadi doonaan Badweynta Liibiya ee maraan Tahriibayaasha!!
Ciidanka NATO oo Dagaalkii Burcadbadeeda Soomaalida Joojisay iyo Iyga oo sheegay in ay sii aadi doonaan Badweynta Liibiya ee maraan Tahriibayaasha!!
Ururka gaashaanbuurta NATO ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen hawlgalkii ay ciidamadooda bada ka wadeen biyaha Dalka Sooomaaliya ee ay kula dagaalamayeen burcad badeeda Soomaaliyeed.
Afhayeen u hadlay NATO oo la yiraahdo Dylan White ayaa sheegay in inta badan ciidamadooda ay kala baxeen biyaha Soomaaliya ayna joojiyeen howlgalkii ka dhanka burcad badeeda Soomaalida waxaana uu u sababeeyay inay hadda wax burcad badeed ah ka jirin xeebaha Dalka Soomaaliya.
Afhayeenkaan waxaa uu sheegay in shaqada ugu badan ay hadda u wareejinayaan dhanka badda Mediterranean,ka si ay u bad baadiyaan tahriibayaasha ku baaba’a badda ugana hor tagaan dadka oo dadka kale tahriibaya sida uu yiri.
Sidoo kale sargaalkaan u hadlay gaashaanbuurta NATO waxaa uu xaqiijiyay in inta badan ciidamadooda iyo maraakiibtooda dagaalka ka udhaqaaqeen badweynta Hindiya iyo biyaha Soomaaliya ku teedsan waxaana uu sidoo kale sheegay inay kor kala socon doonaan dhaq dhaqaaqyada ka jira xeebaha Soomaaliya.
Previous PostDaawo MUUQAAL: Musharax Tarsan oo shaaciyey Sir culus oo ku saabsan Wada hadalka Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland!! Next PostDAAWO SAWIRO Dab saakay saakay oo illaa iyo Caawa socda qaasara badan oo ka dhashtay dhulka ay Maamusho Esra´iiliinta´!!